သန်းခေါင်ယံမှာ Ant-Man နဲ့ Wasp ဟာ Netflix ဆီကိုရောက်နေပါပြီ - Netflix ရုပ်ရှင်
သန်းခေါင်ယံမှာ Ant-Man နဲ့ Wasp ဟာ Netflix ဆီကိုရောက်နေပါပြီ
Ant Man Wasp Is Coming Netflix Midnight
Ant-Man နှင့် Wasp ဓာတ်ပုံသည် WDS Media PR File မှတစ်ဆင့်ရရှိခဲ့သည်
ရယ်စရာပန်းခြံများနှင့် rec memes
ဂျိန်းအပျိုစင် spin-off: အဘယ်အရာကို The CW ရဲ့စီးရီးအသစ်ကနေမျှော်လင့်ထားရန် Game of Thrones ရာသီ (၈) ပွဲမှာဘယ်တော့ပြသလဲ။
Paul Rudd၊ Evangeline Lilly နှင့် Michael Douglas တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသော Ant-Man နှင့် Wasp တို့သည်ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်၊ ညသန်းခေါင်ယံ PT တွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်။
ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုဆိန် အလွန်မကြာမီ Netflix ကမှ ဦး ဆောင်နေသည်! သင်ယနေ့ညနှောင်းပိုင်းတွင်နေပါက၊ Netflix ပေါ်ရှိရုပ်ရှင်ကိုဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့ညသန်းခေါင်ယံတွင်စတင်ကြည့်ရှုနိူင်သည်။ Marvel ရုပ်ရှင်အသစ်ကိုကြည့်ရန်နောက်ကျနေမည်လား။
နောက်ဆုံးအခြေအနေ - Ant-Man နှင့် Wasp သည် Netflix တွင်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
2018 ၏ Q3 သို့မဟုတ် Q4 တွင်ထွက်ရှိသော Marvel ရုပ်ရှင်အသစ်များမရှိခဲ့ပါ ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုဆိန် ပြဇာတ်ရုံများတွင်ဖြန့်ချိမည့်နောက်ဆုံးအံ့ Mar ဖွယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒါကရုပ်ရှင်အကြားအတော်လေးရှည်လျားသောကွာဟမှုပဲ! ၏ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံသည် အဆုံးမဲ့စစ်ပွဲ, ဒါဟာသဘာဝကျပါတယ်။
ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုဆိန် Evangeline Lilly၊ Michael Douglas၊ Michael Pena, Judy Greer နှင့်အခြားသူများပါဝင်သည့် Paul Lang ကို Ant-Man အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်၌ Ant-Man သည် Wasp အဖွဲ့နှင့်လူကြမ်းသစ်ဖြစ်သည့် Ghost ကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးပမ်းသော်လည်းအခြားကစားများမှာမူ။
9 ဇာတ်လမ်းတွဲ 12 လမ်းလျှောက်သေပြီရာသီစောင့်ကြည့်
ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုဆိန် Marvel ရဲ့အကောင်းဆုံးအသစ်သောရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်စဉ်းစားသည်မဟုတ်။ အောက်ပါဇူလိုင်လ 2018 အတွက်ဝန်ကြီးပြီးနောက်အလွန်ကြီးစွာသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရခဲ့ပေ Avengers: Infinity စစ်ပွဲ Netflix တွင်လည်းတည်ရှိသည်။ မကောင်းတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရှိပေမယ့်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တယ်၊ ပြီးတော့အံ့ fans စရာကောင်းတဲ့ပရိသတ်တွေ Netflix မှာရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အချိန်ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။ Rudd နှင့် Lilly တို့သည်ဓာတုဗေဒအကြီးများရှိပြီး၎င်းတို့သည်ဖျော်ဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပုရွက်ဆိတ်နှင့်ပုဆိန် Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်ရန်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းယခုလ streaming ဝန်ဆောင်မှု၌ဒစ္စနေးရုပ်ရှင်အသစ်ထည့်သွင်းရုံသာမဟုတ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တော်: တစ် Star Wars ပုံပြင် ဒီလအစောပိုင်းကထည့်သွင်းခဲ့သည်နှင့် မယုံနိုင်စရာ2ဇန်နဝါရီလ 30 ရက်နေ့တွင် Netflix က hits!
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ ဒီဟာ Netflix မှာထည့်သွင်းထားတဲ့နောက်ဆုံး Marvel ရုပ်ရှင်အသစ်ပါ။ Disney သည် Netflix နှင့်စာချုပ်ကိုယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဖျက်သိမ်းပြီး၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် streaming service ဖြစ်သော Disney + ကိုစတင်လိုက်သည်။ Marvel ရုပ်ရှင်အသစ်များအားလုံးသည်အနာဂတ်၌ထို streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထည့်သွင်းဖွယ်ရှိသည်။
နောက်တစ်ခု:Net-Flix တွင် Ant-Man နှင့်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၂၅ ခုဇန်နဝါရီတွင်
အိန္ဒိယပွဲစဉ် netflix ရာသီ 2
supergirl ရာသီ5ထွက်လာပါဘူး
dexter ၏ရာသီ9ထွက်လာမယ့်အခါ
netflix April 2017 ရက်တွင်ရုပ်ရှင်
ကြယ်ပွင့် Hulu မွေးဖွားသည်
ကောင်းကင်ကန့်သတ်ချက် queer မျက်စိပါပဲ